Ngosipụta | Martech Zone
Martech Zone bụ a blog kere site Douglas Karr ma ndị nkwado anyị kwadoro. Maka ajụjụ gbasara blọọgụ a, biko kpọtụrụ anyị.
Blog a na-anabata ụdị mgbasa ozi ego, nkwado, ntinye ego akwụ ụgwọ ma ọ bụ ụdị ụgwọ ndị ọzọ.
Nke a blog monetizes ụfọdụ nke njikọ ya.
Nke a blog na-agbaso okwu ọnụ ahịa ahịa. Anyị kwenyere na ịkwụwa aka ọtọ nke mmekọrịta, echiche na njirimara. The akwụ ụgwọ natara nwere ike imetụta mgbasa ozi ọdịnaya, isiokwu ma ọ bụ posts mere na nke a blog. Ọdịnaya ahụ, ohere mgbasa ozi ma ọ bụ post ga-amata n'ụzọ doro anya dị ka ọdịnaya akwụ ụgwọ ma ọ bụ nkwado.
Onye nwe (s) nke blọọgụ a kwụrụ ụgwọ iji nye echiche na ngwaahịa, ọrụ, weebụsaịtị yana isiokwu ndị ọzọ dị iche iche. Agbanyeghị na onye nwe (b) blọọgụ a na-anata ụgwọ maka ihe ndị anyị bipụtara ma ọ bụ mgbasa ozi, anyị na-enyekarị echiche ziri ezi, nchọta, nkwenye, ma ọ bụ ahụmịhe isiokwu ndị ahụ ma ọ bụ ngwaahịa ndị ahụ. Echiche na echiche ndị e gosipụtara na blog a bụ nke ndị na-ede blọgụ. Ekwesịrị ị nweta ngwaahịa ọ bụla, ọnụ ọgụgụ, nkwupụta ma ọ bụ nnọchite ndị ọzọ gbasara ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọ bụla site na ndị nrụpụta, ndị na-eweta ma ọ bụ ndị ọzọ na-ekwu okwu.
Blog a nwere ọdịnaya nke nwere ike igosi esemokwu. A ga-amata ọdịnaya a mgbe niile.